အိမ် > အမေးများသော မေးခွန်းများ > သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းခြင်း
OMRON ချိတ်ဆက် အက်ပလီကေးရှင်း
ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှု - အခြား
အခြေခံကျကျပြောရလျှင် သွေးပေါင်ချိန်ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ သွေးကြောများထဲတွင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော သွေးများမှ သွေးကြောနံရံများအပေါ် သက်ရောက်နေသော အားကို ဆိုလိုပါသည်။
အပေါ်သွေးဆိုသည်မှာ (သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းမော်နီတာတွင်ပေါ်သော အပေါ်နံပါတ်) နှလုံးခုန်သော၊ညှစ်သော အခါတွင် သွေးကြောများအပေါ်သက်ရောက်သော အများဆုံး ဖိအားကို ဆိုလိုသည်။
အောက်သွေးဆိုသည်မှာ (သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းမော်နီတာတွင်ပေါ်သော အောက်နံပါတ်) နှလုံးခုန်သော၊ ညှစ်သော အခါတွင် သွေးကြောများအပေါ်သက်ရောက်သော အနည်းဆုံး ဖိအားကို ဆိုလိုသည်။
သွေးတိုးခြင်း (သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
အပေါ်သွေးပမာဏသည် 135 mmHg နှင့်ညီမျှသော သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ပမာဏသို့ရောက်ရှိပြီး အောက်သွေးပမာဏသည် 80 mmHg သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ပမာဏသို့ရောက်ရှိလျှင် သွေးတိုးသည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ ကုသမှု မခံယူပါက သွေးတိုးခြင်းမှတဆင့် နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ၊ သတိမေ့ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အမြင်အာရုံပျက်စီးသည့်ရောဂါ စသည့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန် အပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသလား?
မိမိသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသော အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သို့မဟုတ် နေ့/ညအချိန်ပေါ်မူတည်၍ လူ၏သွေးပေါင်ချိန် အပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းသည် ပုံမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အစားအသောက်စားသုံးမှု၊ လှုပ်ရှားသွားလာမှု စသည်တို့အပြင် နေ့/ညအချိန်တို့ကပါ လူတစ်ယောက်၏ သွေးပေါင်ချိန် ပြောင်းလဲမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အစားအသောက်စားသုံးမှုနှင့် လှုပ်ရှားသွားလာမှုတို့အပေါ်မူတည်၍ လူတစ်ယောက်၏ သွေးပေါင်ချိန်သည် တစ်ရက်လျှင် 20mmHg အထိပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏ သွေးပေါင်ချိန်ကို မှန်မှန်တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး သွေးပေါင်ချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်ပြသဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန်တစ်ကြိမ်တစ်ခါတိုင်းတာမှုပြုလုပ်ရုံဖြင့် ရရှိသော အဖြေအပေါ်စိတ်ပူပန်ခြင်း မဖြစ်ပါနှင့်။ သွေးပေါင်ချိန်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနေခြင်းဖြစ်သောကြောင့် နေ့စဉ်အချိန်မှန်တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပြီး ထိုသို့တိုင်းတာမှသာ မိမိ၏ သွေးပေါင်ချိန်အခြေအနေမှန်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အချိန်တွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သနည်း?
မနက်ဘက်တွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းမည်ဆိုပါက အိမ်ယာမှထပြီး ၁ နာရီအကြာတွင် တိုင်းပါ။ (သန့်စင်ခန်းဝင်ပြီး ၁-၂ မိနစ်ခန့် နားပြီးလျှင် မနက်စာမစားမီ ထိုင်လျက် အနေအထားဖြင့် တိုင်းတာပါ)
ညဖက်တွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းမည်ဆိုပါက မတိုင်းတာမီ ၁-၂ မိနစ်ခန့်နားပြီး အိပ်ယာမဝင်မီ ထိုင်လျက်အနေအထားဖြင့် တိုင်းတာပါ။
သွေးပေါင်ချိန်ကို နေ့စဉ်အချိန်မှန် တိုင်းတာရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
အိမ်မှာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ဆီရောက်မှ တိုင်းတာခြင်းများတွင် မတူညီမှုများ ရှိနိုင်ပါသလား?
ကွဲပြားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဖြစ်များသော အကြောင်းများမှာ
၁. လူတစ်ယောက်၏ သွေးပေါင်ချိန်သည် တစ်နေ့လုံး အပြောင်းအလဲဖြစ်နေသောကြောင့် တိုင်းတာလိုက်သည် အခါတိုင်းတွင် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၂. ထိုသို့ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လေ့လာချက်များအရ လူတစ်ယောက်၏ သွေးပေါင်ချိန်သည် စိတ်ဖိစီးမှု၊ အစားအသောက်စားသုံးမှု၊ လှုပ်ရှားသွားလာမှု တို့အပေါ်မူတည်၍ တစ်ရက်လျှင် 20mmHg အထိ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိထားပါသည်။
၃. သင့်တွင် “White coat hypertension” ဟုခေါ်သော အခြေအနေမျိုး ရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်ရုံးခန်းတွင် သို့မဟုတ် ဆေးရုံဆေးခန်းတွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းပါက ပုံမှန်ထက်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်သွားတတ်သော အခြေအနေကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄. သင့်တွင် “Masked hypertension” ဟုခေါ်သော အခြေအနေမျိုးရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်ရုံးခန်းတွင် သို့မဟုတ် ဆေးရုံဆေးခန်းတွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းပါက ပုံမှန်ထပ်သွေးပေါင်ချိန်ကျသွားတတ်သော အခြေအနေကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိအိမ်တွင် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ဆီရောက်မှ တိုင်းတာသော သွေးပေါင်ချိန်အဖြေမတူညီပါက မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ ရလာသောအဖြေများကိုသာ ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်ပြသ၍ သင်၏နှလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၁. ခြေထောက် နှစ်ဖက်စလုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်ချ၍ ၅ မိနစ်ခန့် ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေပါ။
၂. မတိုင်းတာမီ မိနစ် ၃၀ ခန့်ကြိုတင်၍ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း၊ ကဖိမ်းဓာတ်ပါဝင်သော သောက်စရာများနှင့် အရက်သောက်သုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
၄. စာအုပ်သို့မဟုတ် app ကိုအသုံးပြု၍ ရလာသော တိုင်းတာမှုများကို မှတ်သားထားပါ။
အပေါ်သွေးနှင့် အောက်သွေး မည်သည်က ပိုအရေးကြီးသနည်း?
၂ မျိုး စလုံး အရေးကြီးပါသည်။ အပေါ်သွေးသည် နှလုံးညှစ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် သွေးပေါင်ချိန်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်သွေးသည် နှလုံးညှစ်ချိန်ကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် သွေးပေါင်ချိန်ကို တိုင်းတာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပေါ်သွေးသည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကဲ့သို့ ပြင်းထန်သည့် ရောဂါများကို ရှာဖွေရာတွင် အဓိကကြည့်ရှုရသောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ပို၍ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အပေါ်သွေး၊ အောက်သွေး ၂ မျိုးစလုံး ကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
လက်မောင်းတွင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် လက်ကောက်ဝတ်တွင် တိုင်းတာခြင်းမှရရှိသော သွေးပေါင်ချိန်အဖြေများ ကွဲပြားမှုရှိပါသလား?
သွေးပေါင်ချိန်သည် ခန္ဓာကိုယ်နေရာအလိုက် အပြောင်းအလဲရှိသောကြောင့် လက်မောင်းနှင့် လက်ကောက်ဝတ်တွင်တိုင်းတာသော ရလဒ်များမတူညီခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ Omron သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များအားလုံးသည် လက်မောင်းတွင်တိုင်းတာသည်ဖြစ်စေ၊ လက်ကောက်ဝတ်တွင်တိုင်းတာသည်ဖြစ်စေ တူညီသော နည်းစနစ်နှင့် အဖြေထုတ်မှုစနစ်ကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။
Omron မှထုတ်လုပ်သော လက်မောင်းနှင့်လက်ကောက်ဝတ်ပတ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိရိယာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အိမ်တွင် မိမိဘာသာ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းခြင်းသည် သွေးတိုးကျဆေးများ၏ သက်ရောက်မှုများအပြင် Masked hypertension နှင့် တခြားရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော ရောဂါများကိုပါ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အသုံးဝင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးက မိမိအိမ်တွင် သွေးပေါင်ချိန်မှန်မှန်တိုင်းတာရန် တိုက်တွန်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မိမိအိမ်တွင် သွေးပေါင်ချိန်မှန်မှန်တိုင်းတာသင့်ကြောင်း ဆေးပညာအဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်တွန်းမှုများကိုလေ့လာရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အိမ်တွင်မိမိဖာသာ ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ဖြင့် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ဆီရောက်မှ တိုင်းတာခြင်းတို့သည် မည်သို့ကွဲပြားပါသနည်း?
ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များသည် တိုင်းတာရာတွင် အသံကိုနားထောင်ပြီးတိုင်းတာသည့်နည်းထက် တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းများကို ဖမ်းယူသောနည်းဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ အသံကိုနားထောင်ပြီးတိုင်းတာရာတွင် ဆရာဝန်သည် အပေါ်သွေးနှင့် အောက်သွေးကို နှလုံးခုန်နှုန်းအသံများအားနားကျပ်ဖြင့် နားထောင်ပြီး တိုင်းတာပါသည်။ တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းများကို ဖမ်းယူသောနည်းသည် သွေးကြောများအတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော သွေးများ၏ တုန်ခါမှုများကို ဖမ်းယူပြီး ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် အဖြေထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Omron digital သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်သည် အလားတူ တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းဖမ်းယူသောနည်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းပေးသောကြောင့် နားကျပ်အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သလို အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူပါသည်။
ထို့အပြင် မိမိအိမ်တွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းသည် နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်သွားနိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင် အဖြေများကို ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းဖမ်းယူသောနည်းအသုံးပြုထားသည့် အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များမှ မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သနည်း?
တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းများကိုဖမ်းယူသောနည်းသည် သွေးကြောများအတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော သွေးများ၏ တုန်ခါမှုများကို ဖမ်းယူပြီး ဒီဂျစ်တယ် နည်းဖြင့် အဖြေထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Omron ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်သည် အလားတူ တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းဖမ်းယူသောနည်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းပေးသောကြောင့် နားကျပ်အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သလို အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူပါသည်။
လက်ကောက်ဝတ်တွင်တိုင်းတာသည့်စက်နှင့် လက်မောင်းတွင်တိုင်းတာသည့်စက်တွင် မည်သည့် စက်ကိုဝယ်ယူသင့်ပါသနည်း?
တစ်ဦးခြင်းလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ မည်သည့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်သည် မိမိနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည်ဆိုသည်ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ဝယ်ယူအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက် ဝယ်ယူအသုံးပြုမည့်သူများနှင့် မိမိ၏သွေးတိုးအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်လိုသူများသည် လက်မောင်းပတ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
Digital သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များသည် တိကျမှုရှိပါသလား?
Omron ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များအားလုံးသည် တိကျမှုရှိကြောင်း ဆေးပညာအရ သက်သေပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ စက်များအားလုံးသည် အဖြေများကို အောက်ပါအတိုင်းအတာအတွင်းတိကျစွာ ပြပေးနိုင်ကြောင်း ဆေးပညာအရသက်သေပြပြီးဖြစ်ပါသည်:
- သွေးပေါင်ချိန် 3mmHg အတွင်းသာအနည်းအများရှိ သို့မဟုတ် ၂% သာကွာခြားချက်ရှိ
- သွေးခုန်နှုန်းသည် ၅ ရာခိုင်နှုန်း အတွင်းသာ အနည်းအများရှိ
ထိုရလဒ်များသည် AAMI (ဆေးပစ္စည်းအသင်းကြီး) ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ တခြား ကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သော သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်အဖြေများကို သိရှိလိုပါက ယင်းအသင်းကြီးသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ မိမိအိမ်တွင်အသုံးပြုမည့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်တစ်ခုမဝယ်ယူမီ စက်ပစ္စည်း၏ တိကျမှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့ကို သိရှိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
Omron ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ကို မည်မျှကြာလျှင် တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်ပါသနည်း?
Omron ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များအားလုံးသည် သေချာဂရုတစိုက်ဖြင့် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စက်၏ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် တိကျမှုကို ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ စစ်ဆေးရန်အတွက် သင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့တွင်ရှိသော Omron ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို ဆက်သွယ်ပါ။